Timbuktu | Akụkọ Njem
Image | Ihe nzuzo
Ọkara nke etiti etiti savannah ndị Africa na ọzara Sahara, na mpaghara a na-akpọ Sahel kilomita asaa site na Osimiri Niger, bụ Timbuktu, nke bụ isi obodo ndị Tuareg maka ọtụtụ afọ na Republic of Mali.
A maara dị ka "African Athens", ọnọdụ ya dị ka ala mere ka ọ bụrụ ebe nzukọ dị n'etiti West Africa na ndị nomadic Berber, ịbụ ebe akụkọ ihe mere eme banyere ụzọ azụmaahịa trans-Saharan, yana isi obodo ime mmụọ nke Islam na Africa niile n'ọtụtụ narị afọ XV na XVI. Obodo a bụ World Heritage Site ma ọ bụghị maka obere. Sonyere anyị ka anyị chọpụta ya.
Afọ ise gara aga, Timbuktu nwere ọdachi ịdaba n'aka ndị jihadists bụ ndị bibiri obodo ahụ ma mee ka ndị bi na ya gbapụ. Nwayọọ nwayọọ mmiri ahụ laghachiri n'ụzọ ha wee nwee udo laghachi na mgbago ugwu nke Mali maka ọdịmma nke ndị bi na ndị njem, ndị nwere ike iju ha anya ọzọ site na adobe na apịtị mara mma nke Timbuktu, otu n'ime ihe kachasị mma n'ụwa. ụzọ ya. Fọdụ ebe kachasị akara ngosi ileta ebe a bụ ụlọ alakụba Djingareyber ma ọ bụ ụlọ alakụba Sidi Yahya.
1 Ogige Alakụba Sidi Yahya
2 Alakụba Sankore
3 Alakụba Djingareyber
4 Mpaghara ndị ọzọ nke Timbuktu
Ogige Alakụba Sidi Yahya
Ọ bụ ụlọ arụsị na madrassa na Timbuktu, nke a malitere ịrụ ya n'ọchịchọ nke Sheikh El-Mokhtar Hamalla. O were afọ iri anọ iji mezue ma bụrụ nnukwu ebe mmụta maka mpaghara ahụ.
Na 2012, ndị nnupụisi Islamist sitere na otu Ansar Dine si Mali kụwara ọnụ ụzọ ụlọ alakụba ahụ, si otú a na-agbagha nkwenkwe ndị mmadụ na ọnụ ụzọ ahụ ga-emechi ruo na njedebe nke ụwa.
Mosquelọ alakụba Sankore ma ọ bụ Sankore Madrasa bụ nke kacha ochie n'ime ụlọ akwụkwọ mmụta atọ dị na Timbuktu.
Foto | Akwụkwọ akụkọ
Alakụba Djingareyber bụ ebe mmụta mmụta ama ama mara ama nke Malian wuru na 1327 site n'aka onye na-ede uri Andalusia Abu Haq Es Saheli. Djinguereber bụ otu n'ime madrasas atọ mejupụtara Mahadum nke Sankore na owuwu ya jiri ihe ndị sitere n'ala dịka ụrọ, eriri, ahịhịa na nkụ. Edere ya na UNESCO World Heritage List na 1988 yana ụlọ alakụba Sidi Yahya na ụlọ alakụba Sankore. Nke a bụ naanị ụlọ alakụba nke ndị ọbịa na-abụghị Muslim nwere ike ịnweta na Timbuktu.
Mpaghara ndị ọzọ nke Timbuktu
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọ fodụrụ ntakịrị ihe ngosipụta nke akụkọ ntolite ya ka echekwara n'ihi ọzara na iyi ọha egwu jihadist, A ka nwere isi ihe ndị ọzọ nwere nnukwu mmasị dịka mgbidi ahụ, ebe a na-amụ Ahmed Baba, ebe obibi Buctú, ụlọ ndị nyocha ma ọ bụ ụlọ ngosi ihe ngosi nke Almansour Korey.
Site na nkwuputa ya dị ka Ebe Ihe Nketa bywa site na UNESCO na 1988, e mepụtara mmemme iji chebe ma chebe obodo ahụ site na mbata nke ọzara. Otú ọ dị, ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke okpukpe nke mba ahụ akpatawo mbibi nke ụlọ arụsị na ihe owuwu ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Timbuktu